Fanaovana hosoka : teratany israelianina karohina | NewsMada
Fanaovana hosoka : teratany israelianina karohina
Namoaka didy mampaka ny teratany israelinina iray, teraka tany Rosia, izay voarohirohy amin’ny raharaha fisolokiana sy halatra ny fitsarana. Efa nampanantsoina teny amin’ny fitsarana izy io, saingy tsy nipoitra mihitsy. Notorian’ny teratany rosianina iray, niara-niasa taminy ihany ho nanodina ny fananany rehetra tamin’ny alalan’ny hosoka ity teratany vahiny ity. “Efa ho roa volana izy io no nampanatsoina teny amin’ny polisy, fa tsy tonga. Toy izany koa ny teny amin’ny fitsarana, tsy nipoitra. Fantatra fa lasa any ivelany izy. Hisy ny fanatanterahana ny didy mampaka rahampitso (anio) ka hozahana ity rangahy antsoina hoe Fedder Judas ity”, hoy ny mpitandro filaminana misahana ny raharaha.
Misy Malagasy maromaro tafiditra amin’ity raharaha fisolokiana rosianina ity, ary efa niakatra teny amin’ny fampanoavana sy ny mpitsara zokiolona nanaovana famotorana lalina ny raharaha. “Efa voaporofo ny hosoka rehetra nataon’ireo olona ireo, ary efa am-pelatanan’ny fitsarana ny raharaha. Efa nisy hita koa ny fiara nahodin’ireo olona ireo ary mbola giazana amin’izao fotoana izao”, hoy ny fanamafisana avy amin’ny polisy.
Miandry ny fiakaran’ny raharaha eny amin’ny fitsarana ny mpitory. Fitoriana roa sosona ny miandry ilay Israelianina io amin’izao fotoana izao. Efa anatin’ny fanakatonana ny fanadihadiana lalina amin’ny fitoriana faharoa ny polisy. Voalaza fa tao anatin’ny 7 volana nanaovana ny fanamarinana rehetra, ary voaporofo marina fa nisy ny fisolokiana ilay vazaha rosianina.